Ihowuliseyili Glass Bottle mveliso kunye nabenzi
Iglasi yeglasi yokuthambisa ibhotile yokuthambisa i-20 ml i-30 ml i-50 ml ye-100 ml
Cinezela / Cofa Ukukhetha okuhle ekhaya, iifowuni ezimbini zokushicilela ziyafumaneka.
Imathiriyeli yeglasi engenasiphelo enobuhlobo yenza ukuba kube lula ukuyisebenzisa.
Iplastiki engama-50ml yesigqubuthelo sobisi olunamaqhekeza sinokubhotywa ngokwahlukeneyo
UMGANGATHO-OPHAKAMILEYO】 Wenziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu, ezomeleleyo neziphathekayo, ezikhuselekileyo nezisempilweni, eziguqukayo kwaye ezilula, ukugcina indawo, ukuphinda kusetyenziswe, kulula ukuyisebenzisa nokufaka.
Ubungakanani obugqibeleleyo benza ukuba ifaneleke ngakumbi kwisithuba esincinci okanye kwikona yegumbi. Iyakwazi ukuhlela izinto zakho ezingamanzi ukuze zigcinwe ngokulula kwaye zisetyenziswe kwaye zigcine indlu yakho icocekile kwaye icocekile.
UKUSETYENZISWA NGOKUQHELEKILEYO ERS Kufanelekile ukuba kwenziwe iziqholo, isibulala-ntsholongwane, iyeza, utywala nezinye izinto ezingamanzi. Ukusasaza ngokufanelekileyo ulwelo ukuze luhlelwe kwaye lusebenziseke lula.
【Iyathwala kwaye iyenzeka】 Ifanelekile ngobukhulu kwaye kulula ukuyiphatha. Ingasetyenziselwa iihambo zangaphandle ukugcina nokugcina izinto ezingamanzi ofuna ukuziphatha.
Ibhotile yesiselo yokukhanya eyi-500ml
Ibhotile yesiselo eyi-500ml